Ruzivo rwakadzama nezve CHECKDB Kanganiso "Yakawandisa (# #: # #) mune dhatabhesi ID # # yakamisikidzwa yakapihwa muGAM, asi hapana SGAM kana IAM yakapa.
musha Products DataNumen SQL Recovery CHECKDB Kanganiso: Yakawandisa (##: ##) MuDhatabhesi Id # # InoMakisheni Akagoverwa Mune Iyo Gamu, Asi Hapana Sgam Kana Iam Yakaigovera Iyo
Ruzivo rwakadzama nezve CHECKDB Kanganiso "Yakawandisa (##: ##) MuDhatabhesi Id # # Inomakidzwa Yakagoverwa MuGamu, Asi Hapana Sgam Kana Iam Yakaigadza"
Kugadzirisa: Iyo saizi (1: 296) yakaendeswa kubva kuchinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 0 (mhando Isingazivikanwe).
Kugadzirisa: Iyo saizi (1: 304) yakaendeswa kubva kuchinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 0 (mhando Isingazivikanwe).
Kugadzirisa: Iyo saizi (1: 312) yakaendeswa kubva kuchinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 0 (mhando Isingazivikanwe).
Kugadzirisa: Iyo saizi (1: 328) yakaendeswa kubva kuchinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 0 (mhando Isingazivikanwe).
Kugadzirisa: Iyo saizi (1: 360) yakaendeswa kubva kuchinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 0 (mhando Isingazivikanwe).
Kugadzirisa: Iyo saizi (1: 376) yakaendeswa kubva kuchinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 0 (mhando Isingazivikanwe).
Kugadzirisa: Iyo saizi (1: 384) yakaendeswa kubva kuchinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 0 (mhando Isingazivikanwe).
Kugadzirisa: Iyo saizi (1: 400) yakaendeswa kubva kuchinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 0 (mhando Isingazivikanwe).
Kugadzirisa: Iyo peji (1: 285) rakaendeswa kubva kuchinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597764222976 (mhando Isingazivikanwe).
Kugadzirisa: Iyo peji (1: 287) rakaendeswa kubva kuchinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597764222976 (mhando Isingazivikanwe).
Kugadzirisa: Iyo peji (1: 289) rakaendeswa kubva kuchinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597764222976 (mhando Isingazivikanwe).
Kugadzirisa: Iyo peji (1: 291) rakaendeswa kubva kuchinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597764222976 (mhando Isingazivikanwe).
Kugadzirisa: Iyo peji (1: 293) rakaendeswa kubva kuchinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597764222976 (mhando Isingazivikanwe).
Kugadzirisa: Iyo peji (1: 368) rakaendeswa kubva kuchinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597764222976 (mhando Isingazivikanwe).
Kugadzirisa: Iyo peji (1: 283) rakaendeswa kubva kuchinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597770317824 (mhando Isingazivikanwe).
Msg 8948, Chikamu 16, State 3, Mutsara 8
Dhatabhesi kukanganisa: Peji (1: 284) inoratidzirwa nemhando isiriyo muPFS peji (1: 1). PFS chinzvimbo 0x70 inotarisirwa 0x60.
Dhatabhesi kukanganisa: Peji (1: 286) inoratidzirwa nemhando isiriyo muPFS peji (1: 1). PFS chinzvimbo 0x70 inotarisirwa 0x60.
Dhatabhesi kukanganisa: Peji (1: 288) inoratidzirwa nemhando isiriyo muPFS peji (1: 1). PFS chinzvimbo 0x70 inotarisirwa 0x60.
Dhatabhesi kukanganisa: Peji (1: 290) inoratidzirwa nemhando isiriyo muPFS peji (1: 1). PFS chinzvimbo 0x70 inotarisirwa 0x60.
Dhatabhesi kukanganisa: Peji (1: 292) inoratidzirwa nemhando isiriyo muPFS peji (1: 1). PFS chinzvimbo 0x70 inotarisirwa 0x60.
Dhatabhesi kukanganisa: Peji (1: 294) inoratidzirwa nemhando isiriyo muPFS peji (1: 1). PFS chinzvimbo 0x70 inotarisirwa 0x60.
Dhatabhesi kukanganisa: Peji (1: 295) inoratidzirwa nemhando isiriyo muPFS peji (1: 1). PFS chinzvimbo 0x70 inotarisirwa 0x60.
Msg 8905, Chikamu 16, State 1, Mutsara 8
Yakawandisa (1: 296) mune dhatabhesi ID 39 yakamisikidzwa yakapihwa muGAM, asi hapana SGAM kana IAM yakazvigovera.
Yakawandisa (1: 304) mune dhatabhesi ID 39 yakamisikidzwa yakapihwa muGAM, asi hapana SGAM kana IAM yakazvigovera.
Yakawandisa (1: 312) mune dhatabhesi ID 39 yakamisikidzwa yakapihwa muGAM, asi hapana SGAM kana IAM yakazvigovera.
Yakawandisa (1: 328) mune dhatabhesi ID 39 yakamisikidzwa yakapihwa muGAM, asi hapana SGAM kana IAM yakazvigovera.
Yakawandisa (1: 360) mune dhatabhesi ID 39 yakamisikidzwa yakapihwa muGAM, asi hapana SGAM kana IAM yakazvigovera.
Msg 8928, Chikamu 16, State 6, Mutsara 8
Chinhu ID 0, index ID -1, kupatsanura ID 0, kugovera unit ID 0 (mhando Isingazivikanwe): Peji (1: 368) harina kugadziriswa. Ona zvimwe zvikanganiso zveruzivo.
Yakawandisa (1: 376) mune dhatabhesi ID 39 yakamisikidzwa yakapihwa muGAM, asi hapana SGAM kana IAM yakazvigovera.
Yakawandisa (1: 384) mune dhatabhesi ID 39 yakamisikidzwa yakapihwa muGAM, asi hapana SGAM kana IAM yakazvigovera.
Yakawandisa (1: 400) mune dhatabhesi ID 39 yakamisikidzwa yakapihwa muGAM, asi hapana SGAM kana IAM yakazvigovera.
Msg 8909, Chikamu 16, State 1, Mutsara 8
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 281475001417728 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 376) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (70:34).
Msg 8906, Chikamu 16, State 1, Mutsara 8
Peji (1: 284) mune dhatabhesi ID 39 yakagoverwa muSGAM (1: 3) uye PFS (1: 1), asi haina kupihwa chero muIAM. PFS mireza 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Peji (1: 285) mune dhatabhesi ID 39 yakagoverwa muSGAM (1: 3) uye PFS (1: 1), asi haina kupihwa chero muIAM. PFS mireza 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597764222976 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 285) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (8074:44).
Peji (1: 286) mune dhatabhesi ID 39 yakagoverwa muSGAM (1: 3) uye PFS (1: 1), asi haina kupihwa chero muIAM. PFS mireza 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Peji (1: 287) mune dhatabhesi ID 39 yakagoverwa muSGAM (1: 3) uye PFS (1: 1), asi haina kupihwa chero muIAM. PFS mireza 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597764222976 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 287) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (7620:27).
Peji (1: 288) mune dhatabhesi ID 39 yakagoverwa muSGAM (1: 3) uye PFS (1: 1), asi haina kupihwa chero muIAM. PFS mireza 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Peji (1: 289) mune dhatabhesi ID 39 yakagoverwa muSGAM (1: 3) uye PFS (1: 1), asi haina kupihwa chero muIAM. PFS mireza 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597764222976 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 289) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (8053:29).
Peji (1: 290) mune dhatabhesi ID 39 yakagoverwa muSGAM (1: 3) uye PFS (1: 1), asi haina kupihwa chero muIAM. PFS mireza 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Peji (1: 291) mune dhatabhesi ID 39 yakagoverwa muSGAM (1: 3) uye PFS (1: 1), asi haina kupihwa chero muIAM. PFS mireza 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597764222976 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 291) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (7098:50).
Peji (1: 292) mune dhatabhesi ID 39 yakagoverwa muSGAM (1: 3) uye PFS (1: 1), asi haina kupihwa chero muIAM. PFS mireza 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Peji (1: 293) mune dhatabhesi ID 39 yakagoverwa muSGAM (1: 3) uye PFS (1: 1), asi haina kupihwa chero muIAM. PFS mireza 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597764222976 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 293) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (7098:50).
Peji (1: 294) mune dhatabhesi ID 39 yakagoverwa muSGAM (1: 3) uye PFS (1: 1), asi haina kupihwa chero muIAM. PFS mireza 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Peji (1: 295) mune dhatabhesi ID 39 yakagoverwa muSGAM (1: 3) uye PFS (1: 1), asi haina kupihwa chero muIAM. PFS mireza 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597764222976 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 313) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (7220:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597764222976 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 328) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (6846:34).
Peji (1: 368) mune dhatabhesi ID 39 yakagoverwa muSGAM (1: 3) uye PFS (1: 1), asi haina kupihwa chero muIAM. PFS mireza 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597764222976 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 368) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (6:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597764222976 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 385) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (7074:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597764222976 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 400) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (6818:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597769400320 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 296) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (4044:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597769465856 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 384) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (4076:34).
Peji (1: 283) mune dhatabhesi ID 39 yakagoverwa muSGAM (1: 3) uye PFS (1: 1), asi haina kupihwa chero muIAM. PFS mireza 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597770317824 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 283) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (3374:54).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597783752704 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 297) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (10:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597783818240 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 298) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (18:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597783883776 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 299) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (42:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597783949312 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 300) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (14:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597784014848 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 301) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (14:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597784080384 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 302) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (32:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597784145920 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 303) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (56:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597784211456 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 304) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (34:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597784276992 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 305) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (30:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597784342528 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 306) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (10:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597784408064 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 307) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (98:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597784473600 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 308) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (34:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597784539136 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 309) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (20:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597784604672 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 310) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (38:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597784670208 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 311) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (30:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597784735744 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 312) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (32:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597787881472 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 360) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (24:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597787947008 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 361) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (6:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597788012544 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 362) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (30:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597788078080 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 363) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (60:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597788143616 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 364) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (36:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597788209152 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 365) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (8:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597788274688 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 366) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (50:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597788864512 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 367) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (24:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597788995584 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 377) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (34:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597789061120 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 378) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (52:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597789126656 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 379) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (90:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597789192192 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 380) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (34:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597789257728 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 381) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (52:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597789323264 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 382) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (76:34).
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 0, index ID -1, partition ID 0, kupihwa unit ID 27021597789388800 (mhando Isingazivikanwe), peji ID (1: 383) ine isiriyo peji ID mune yayo peji musoro. Iyo PejiId mune iro peji musoro = (16:34).
CHECKDB yakawana 31 ekugovana zvikanganiso uye makumi mana neshanu zvikanganiso zvisingaenderane nechinhu chimwe chete chinhu.
CHECKDB yakagadzirisa makumi matatu neshanu zvikero zvekukanganisa uye 31 kusagadzikana zvikanganiso zvisingaenderane nechinhu chimwe chete chinhu.
Kugadzirisa: IAM cheni yechinhu ID 27, indekisi ID 2, chikamu ID 562949955190784, chikamu unit ID 562949955190784 (mhando In-row data), yakaderedzwa pamberi peji (1: 288) uye ichavakwazve.
Msg 2575, Chikamu 16, State 1, Mutsara 8
Iyo Index Allocation Mepu (IAM) peji (1: 288) inonongedzerwa kune inotevera pointer yeIAM peji (0: 0) mune chinhu ID 27, index ID 2, partition ID 562949955190784, kupihwa unit ID 562949955190784 (Type In-row data), asi haina kuwanikwa muscan.
CHECKDB yakawana 1 kugovera zvikanganiso uye 0 kusagadzikana zvikanganiso mutafura 'sys.sysowners' (chinhu ID 27).
CHECKDB yakagadzirisa 1 kugovera zvikanganiso uye 0 kusagadzikana zvikanganiso mutafura 'sys.sysowners' (chinhu ID 27).
Kugadzirisa: Iyo peji (1:79) rakapihwa chinhu ID 34, index ID 2, partition ID 562949955649536, kupihwa unit ID 562949955649536 (Type In-row data).
Kugadzirisa: IAM cheni yechinhu ID 34, indekisi ID 2, chikamu ID 562949955649536, chikamu unit ID 562949955649536 (mhando In-row data), yakaderedzwa pamberi peji (1: 295) uye ichavakwazve.
Kugadzirisa: Iyo peji (1:80) rakapihwa chinhu ID 34, index ID 3, partition ID 844424932360192, kupihwa unit ID 844424932360192 (Type In-row data).
Kugadzirisa: IAM cheni yechinhu ID 34, indekisi ID 3, chikamu ID 844424932360192, chikamu unit ID 844424932360192 (mhando In-row data), yakaderedzwa pamberi peji (1: 368) uye ichavakwazve.
Peji (1: 79) mune dhatabhesi ID 39 yakagoverwa muSGAM (1: 3) uye PFS (1: 1), asi haina kupihwa chero muIAM. PFS mireza 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Iyo Index Allocation Mepu (IAM) peji (1: 295) inonongedzerwa kune inotevera pointer yeIAM peji (0: 0) mune chinhu ID 34, index ID 2, partition ID 562949955649536, kupihwa unit ID 562949955649536 (Type In-row data), asi haina kuwanikwa muscan.
Peji (1: 80) mune dhatabhesi ID 39 yakagoverwa muSGAM (1: 3) uye PFS (1: 1), asi haina kupihwa chero muIAM. PFS mireza 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Iyo Index Allocation Mepu (IAM) peji (1: 368) inonongedzerwa kune inotevera pointer yeIAM peji (0: 0) mune chinhu ID 34, index ID 3, partition ID 844424932360192, kupihwa unit ID 844424932360192 (Type In-row data), asi haina kuwanikwa muscan.
SQL Server yakaona zvine mutsindo kuenderana-kwakavakirwa I / O kukanganisa: isiriyo pejiid (inotarisirwa 1: 261; chaiyo 114: 34). Zvakaitika panguva yekuverengwa peji (1: 261) mune dhatabhesi ID 39 pane 0x0000000020a000 mufaira 'C: Chirongwa Mafaira SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mamwe mameseji mu SQL Server yekukanganisa danda kana system yechiitiko rogi inogona kupa rumwe ruzivo. Iyi ndiyo yakaipa mamiriro ekukanganisa anotyisidzira dhata rekuvimbika uye rinofanira kugadziriswa nekukasira. Pedzisa yakazara yakazara database kuenderana cheki (DBCC CHECKDB). Iko kukanganisa kunogona kukonzerwa nezvinhu zvakawanda; kuti uwane rumwe ruzivo, ona SQL Server Mabhuku Online.
SQL Server yaona kukanganisa kunoenderana-kwakavakirwa I / O kukanganisa: isiriyo pejiid (inotarisirwa 1: 369; chaiyo 40:60). Izvo zvakaitika panguva yekuverengwa kwepeji (1: 369) mune dhatabhesi ID 39 pane 0x000000002e2000 mufaira 'C: Chirongwa Mafaira SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mamwe mameseji mu SQL Server yekukanganisa danda kana system yechiitiko rogi inogona kupa rumwe ruzivo. Iyi ndiyo yakaipa mamiriro ekukanganisa anotyisidzira dhata rekuvimbika uye rinofanira kugadziriswa nekukasira. Pedzisa yakazara yakazara database kuenderana cheki (DBCC CHECKDB). Iko kukanganisa kunogona kukonzerwa nezvinhu zvakawanda; kuti uwane rumwe ruzivo, ona SQL Server Mabhuku Online.
Msg 8905 inoratidza chikamu chakapihwa GAM, asi hapana SGAM kana IAM yakachigovera. Uku kukanganisa kwekugovera.
Mune MDF dhatabhesi, iyo data inochengetwa se mapeji. GAM, SGAM uye IAM zvese zvinoshandiswa kugovera. Uye iyo data yakapihwa muyuniti yeyero (mapeji masere) pachinzvimbo chepeji rimwe rekuvandudza mashandiro. Kana chikamu chakapihwa neGAM asi chisina kupihwa neSGAM kana IAM, ipapo CHECKDB inozivisa Msg 8905, wozoedza kuzvigadzirisa.
Semuenzaniso yakashata MDF mafaera pane iyo CHECKDB REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS tsvaga Msg 8905 kukanganisa, asi ASI kukwanisa kudzosera dhatabhesi, apo DataNumen SQL Recovery anogona.
SQL Server 2014 Kukanganisa11.mdf Kukanganisa11_fixed.mdf